Inona no itovian’ny Bitcoin, ny firohotana tamin’ny voninkazo Tulipe ary ny tsenambola nizeriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2018 12:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, русский, bahasa Indonesia, नेपाली, Italiano, English
Sary avy amin'ny Unsplash azon'ny rehetra ampiasaina, natambatambatra tamin'ny sary avy amin'ny www.vpsi.org an'ny Wikimedia Commons (CC BY 2.0) /
Avy amin'i N. M. Bassey
Te-hahazo vola bebe kokoa ny olon-drehetra: mpangataka, mpianatra, mpangalatra, mpiasa, miliaridera—ny rehetra e! Mamaritra ny habetsaky ny safidy manoloana anao ny vola, ny toerana azonao onenana, ny zavatra azonao na tsy azonao atao. Ka dia te-hahazo vola bebe kokoa hatrany ny rehetra, loharanom-bola bebe kokoa, Lalànan'ny filàna tsy voafetra no filazan'ny ekonomista izany. Mitady ny bebe kokoa hatrany ra-olombelona ary tsy mety afa-po.
Mba hahazoana vola bebe kokoa, manao zavatra isan-karazany isika, miasa isika, mangalatra isika ary mangataka. Saingy mendri-piderana kokoa, ary indraindray dia mahomby kokoa, mampiasa vola isika. Afaka manova ny hoavy ara-bola ny fampiasam-bola ary manala amin'ny fahantrana. Nanao izany amin'ny fotoana lava indrindra ny fihariana mpitsinjara entana sy tolo-draharaha, saingy ny karazana no namafa hampisehoana fa ny fampiasam-bola manan-danja indrindra dia ireo izay mitaky ny fotoananao na ny fanaraha-maso avy aminao, any amin'ireo iasan'ny volanao (hahazoana tombony).
Tonga ny fananana mifaka (trano sy tany), ny entambarotra, ny tsena fifanakalozam-barotra sy vola ary vao haingana indrindra ny cryptocurrencies na “solovola” (volan-tserasera). Manolotra tamberina tsy miankina amin'ny fotoananao na ny ezaka nataonao ireo làlana migodànan'ny fampiasam-bola ireo, fa ny mampiasa vola amin'ny zavatra iray amin'ny fotoana iray mahamety azy no hampanankarena anao— na hanan-karena kokoa ianao—noho ny tamin'ny mety ho tsy nampiasanao ny vola hampitomboana. Hevitra mahomby, afa-tsy hoe nandamòka ireo fampiasam-bola toy ny: nihintsana ny sandan'ny fananana mifaka eny an-tsena, tsy nahazoana tombony ny tsena fifanakalozam-bola, mihena ny vidin'ny entana iray (solika tsy voadio ohatra) ary mihintsana ny sandan'ny solovola.
Ny firohotana nividy voninkazo Tulipe
Tsy zava-baovao ny fihintsanan'ny fampiasam-bola amin'ny fomba mahavariana. Ny voarakitra voalohany indrindra momba izany dia ny fahadalàna nirohotra (hividy) tulipe tamin'ny taonjato faha-17. Nampidirina tao Holandy ny tulipe 100 taona talohan'izany ary nanjary nalaza sy nifampitadiavan'ny mpanankarena sy ny saranga antonony somary ambony kokoa. Tsara tarehy sy sarotra azo ny Tulipe ka noho izany nifandrombahana. Nisy ny nahita izany ho varavarana misokatra hahazoam-bola amin'ny fividianana vonin-tulipes maro nanantena ny hahazo tombony be. Tsy ela dia niditra tao amin'ny tsenambolan'i Amsterdam ny Tulipes, ary dia nihamaro ny olona nividy azy ireny hampitomboana vola haingana.
Na dia tsy mananany ilàna azy manokana aza ny tulipe, tsy ampy hanitra ary tsy manan-danja ara-pitsaboana, tamin'ny fotoanan'ny fahadalàna nirohotra nividy Tulipe, nisy ireo mpampiasa vola nivarotra ny tranon'izy ireo mba ahafahany mividy voniny tokana amin'ny vidiny 76 000 dolara amerikana raha amin'ny sandam-bola amin'izao fotoana izao. Misy zavatra tsaroanao toy izany ve?
Avy eo nanomboka nivarotra izay namboleny ireo lohalaharana tamin'ny fividianana tulipe, ka nihena ny vidiny. Tamin'izany fijotsoana izany, nihamaro hatrany ny olona nivarotra, ary tsy ela dia be loatra ny isan'ny mpivarotra nefa tsy nisy ny mpividy. Nitombo amin'izany ny varotra tanaty fikoropahana, ary tao anatin'ny iray volana, lasa latsaky ny iray dôlara ny vidin'ny tulipe iray vao nitentina 76 000 dolara tsy ela akory izay. Niezaka mafy ny governemanta nampandany ny lalàna hifehezana ny tsena ary hitazona ny tulipe amin'ny toerany. Nipoaka ny vonin'ny tulipe, nirodana ny tsenan'ny tulipe, nitsaha-kevitra ny fahadalàna nirohotra nividy tulipe ary taona maro no niezahan'ny governemanta holandey ho sitrana tamin'ny fahavoazana.
Rehefa namaky voalohany momba ny fahadalana tamin'ny tulipe aho, dia hitako ny fitovitovizana tamin'ireo solovola sy ny Bitcoin, ary hafahafa ilay izy indrindra indrindra. Nanomboka tamin'ny fividianan'ny olona zavatra tsy ilainy ny firohotana tamin'ny tulipe satria nihevitra izy ireo fa indray andro any hisy olona hividy ilay zavatra amin'ny vidiny mihoatra noho ny tany am-piandohana, na dia tsy dia misy ilaivana azy loatra ary ilay zavatra resahina.
Bitcoin, novolavolain'ny Satoshi Nakamoto, dia natao ho maodely vaovao amin'ny fifampindramam-bola eo amin'ny samy olon-tsotra—lentam-bola tsy mandalo olon-kafa na sampan-draharaha toy ny banky, fifanakalozam-bola ary governemanta ary manome vatsy ho an'ireo izay mila azy amin'ny fomba azo antoka, tena izy ary azo hamarinina. Nahafa-po ireo tinadim-bola vahiny maro izy ary nanokatra varavarankely ho amin'ny fahafahana manao zavatra vaovao. Ny olana? Bitcoin, ary ny solovola amin'ny ankapobeny, dia tsy nahavita nampiseho ny tena hilaivana azy hatramin'izao aloha.
Hatramin'izao, tsy mbola nisy ny tena fampiasana ny Bitcoin. Zavatra vitsy monja no tsy vitan'ny fifanakalozana efa misy, ary mila havadika vola mba ahafahana mampiasa azy betsaka. Tahaka ny mpividy tulipe nampiasana vola an'arivony dolara tao anaty voninkazo iray izay tsy nisy dikany, mampiasa vola amin'ny vola izay mbola tsy manamarina ny sandany ny olona. Ary rehefa manipy vola amin'ny zavatra tsy misy fiantraikany na tsy misy fampiasana mazava ny olona dia maka risika goavana izy ireo.
Ny tsenam-bola Nizeriana
Tamin'ny faramparan'ny taona 2000, nanomboka namory olona ny tsenam-bola Nizeriana. Talohan'izay dia nanomboka nitombo ny tahiry tsy fantatra ary tsy ela dia nalaza tamin'ny lohatenin-gazety ny tsenam-bola. Nankalaza ny fiakaran'ny sandan'ny ampahan-drenivola ho fampitomboam-bola ireo mpamakafaka. Nahazo tombony hatramin'ny 100% ny olona. Avy amin'izany, niezaka nanao dokambarotra matevina ireo orinasa mpanera vola. Tamin'ny fanaovana ireo tombony azo ho porofo, dia naharesy lahatra olona an'arivony izy ireo mba hampiasa vola amin'ny tsenam-bola nizeriana. Nanomboka nampiasa vola hitombo haingana tamin'ny alalan'ny fividianana sy fivarotana amin'ny fotoana fohy ezaka ny olona, ​​nandrotsaka vola an-tapitrisany maro tsy nandinika amin'izay tombombarotra ho azony, ny tahirin-drenivolany na ny anjara volany efa voarakitra. Mahita ny fiakatry ny soritry ny tsenambola amin'ny fafana, mbola mihabetsaka indray ireo mpampiasa vola nandrotsa-bola, ka misy ny olona sasany mindram-bola hanampiana ny rotsa-bolan'ireo fampidirana vatsy mampiahiahy.
Tsy ampy herintaona, montsana tamin'ny fomba nahavalalanina ny besinimaro ny tsenam-bola nizeriana. Tany amin'ny tampon'ny 13,5 arivo miliara naira tamin'ny Martsa 2008, nidaraboka tany amin'ny 4,6 arivo miliara naira ny fitambaran'ny vola tao amin'ny tsenam-bola tamin'ny Janoary 2009. Mpanelanelana amin'ny fividianana sy fivarotana taratasim-bola an-jatony no very asa, nakatona ny orinasa ary tsy afa-nandoa ny trosa tsy maintsy efaina ny mpiantoka ara-tsosialy.
Fanamarihana sy lesona avy amin'ny tranga telo vakiantsika
Izay tonga aloha teo amin'ny taranja ihany matetika no mahazo tombony tamin'ny fampitomboam-bola haingana
Mora misidina aoka izany ny zavatra iray tsy tena misy lanjany manokana
Miezaka hatrany hahazo vola mihoatra noho ny hafa ny olona ka hanararaotra hitsambikina hanolotra “fampiasam-bola” mampiahiahy
Raha misy zavatra mandeha vaovao/ ambony taha hatrany, mety tsy ho izay no fotoana tsara indrindra hividianana azy
Arakaraka ny fahazoanao ny fampiasam-bolanao no mahamety azy.
Aza mampitombo vola tsy zakanao ho very
Fantaro ny fotoana hialàna—ary aza tendan-kanina!
Mitandrema amin'ny fahatondrahan'ny tolo-bola mameno ny aterineto, indrindra ireo izay mangataka “fanomezana kely”
Tamin'ny fotoana nanoratana, misanda 9.000-10.000 dôlara, maty antsasaky ny vidiny roa volana lasa izay ny Bitcoin. Maro ny fikoropahana eo amin'ireo mpampiasa vola, amin'ireo izay nividy azy tamin'ny vidiny ambany—960 dolara ny vidiny tamin'ny Janoary 2017—namidy hahazoan-tombony fa mikatrokatro-nify kosa ireo izay nividy mihoatra ny 8000 dolara.
Misara-kevitra ny manam-pahaizana momba ny hoavin'i Bitcoin. Tamin'ny taona 2014, nampitaha azy tamin'ny rafitra ponzi (karazan-tsoloky avo lenta) ny Banky Mondialy, ny sasany kosa nilaza azy ho fisolokiana maneran-tany mampidi-doza, fa misy kosa ireo mpahay toekarena tahaka an'i John Lanchester matoky kokoa ny hoaviny.
Raha ny tena manokana, mitady fomba hampiasana vola amin'ny zavatra manan-danja mazava tsara aho, toy ireo toby famokarana herinaratra ho an'i Nizeria, pilina mampihena ny lanjam-batana, bisikileta ho an'ireo vaventy na matavy, ary blockchain fa amin'ny boky. Izay rehetra mamaly filàna mbola tsy nahazo valiny.
Manalavitra ny zavatra tsy dia azoko loatra aho, ary mianatra miaiky aho fa rehefa misy zavatra anaovana dokambarotra be ka lazain'ny vaovao na lasa mividy azy daholo ny olon-drehetra dia tsy iny no fotoana tsara indrindra hividianana azy ihany koa. Mianatra manadihady aho alohan'ny hampiasako vola, fa tsy hampidera ny fahalalako ara-bola.
Raha namidy tamin'ny vidiny 19 783 dolara ny Bitcoin tamin'ny desambra 2017, niezaka nampitandrina ny olona ny mety hihintsanan'ny vidiny aho. Naneso ahy ny iray amin'ireo olona nampitandremako ary nilaza ny hevitro fa sarotra ny hisian'izany. Manontany tena amin'izay eritreriny aho amin'izao fotoana izao.
Nizeriana bilaogera sy mpaneho hevitra i N. M. Bassey. Manoratra ao amin'ny The Naija Writer izy ary misioka ao amin'ny @StNaija.